Vaovao - Fihaonambe fanombohana ny fihaonam-be tamin'ny tapaky ny taona 2019, fisehoana momba ny fitondran-tena sy ny barbecue DIY
Masinina elektrika Jacquard miaraka amin'ny firafitry Cam
Module Jacquard elektronika sy andriamby
Quartz Watch Series Series
Fiara maotera fitaovana maotera
Neele Ho an'ny milina fanodinana solosaina fisaka sy milina boribory
Jacks sy fanjaitra ho an'ny China Computterised Flat Knitting Machine
Fanjaitra milina ba kiraro
Fihaonan'ny kick-off famintinana ny tapaky ny taona 2019, fisehoan'ny fitondran-tena ao amin'ny ekipa ary DIY fanaovana barbecue
Tamin'ny 6 Jolay 2019, ny sora-baventy tao an-tokotanin'ny Yantai Xinyang Electronics Co., Ltd. dia avo, mozika fety no voahodidina, teny filamatra nifanesy, ary «Fihaonamben'ny Taom-pilalaovana Faran'ny Herinandron'ny Taona Xinyang Elektronika 2019», sora-baventy, balaonina ary balaonina avo tao amin'ny efitrano fihaonamben'ny biraon'ny birao. Ny akanjo dia fety manokana, ary ny olona Xinyang dia niditra an-tsehatra tamin'ny andiany famintinana isan-taona fanao isan-taona. Tamin'ny 13:30, nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana fitantanana tamin'ny alàlan'ny fitarihan'ny "Song of Xinyang". Ny lohan'ny departemanta tsirairay sy ny mpanara-maso ny atrikasa dia samy namintina ny asa tamin'ny tapany voalohan'ny taona ary nandinika ny olan'ny sampana manokana. Ny sain'ny asa amin'ny tapany faharoa amin'ny 2019 dia nomanina. Ny talen'ny Jeneraly Jiang Shiliang dia nihaino Taorian'ny nahavitan'ny tatitra momba ny asan'ny mpiasa rehetra, dia nomena hevitra matotra ny departemanta tsirairay avy, ary ny fandaminana ny asa amin'ny tapany faharoa amin'ny taona dia napetraka mifototra amin'ny zava-misy eo amin'ny tsena ankehitriny. Nahazo dera ihany koa ny atrikasa miolakolaka, fizarana fitaovana, atrikasa fivoriambe, sampana mpamokatra ary departemanta fanaraha-maso kalitao. Ny fanatanterahana ny drafitr'asan'ny tarika dia voamarina tanteraka, ary isaoranay izy ireo noho ny fanoloran-tenan'izy ireo hanatratra ny tanjon'i Xinyang. Amin'ny asantsika isan'andro, misy toerana be dia be hanatsarana ny fizotran'ny fitantanana sy ny valin'ny asa. Tsy maintsy mampiasa ny tombotsoantsika sy ny tanjaky ny ekipantsika isika mba hiondrana an-tsambo ho any Xinyang hahatanteraka ny nofinofin'i Xinyang efa zato taona. Ny olona Xinyang dia tsy maintsy mahafoy ny toe-piainan'izy ireo mampiadana, mampiditra am-pahavitrihana ny fanovana eo amin'ny tontolon'ny tsena, mamolavola fomba fiasa amboadia ary mamolavola vokatra vaovao mifototra amin'ny fiantohana ny kalitaon'ny vokatra tany am-boalohany, ary mivoaka amin-kerimpo haka tsena lehibe. mizara. Aorian'ny lahateny ankapobeny, ny mpitantana rehetra dia miara-mianiana fa tsy maintsy mampiasa fihetsika hitaomana ny manodidina antsika isika, mitarika amin'ny ohatra, manohitra ny tenantsika, manohy mianatra, mitaona ny hafa, tsy mandainga, aza manalavitra ny tsara sy ny ratsy, aza mionona, aza mianina, milofo ho an'ny toerana voalohany, ary olona Xinyang mahafeno fepetra. Araho ny kalitao, manatsara hatrany, manaova fanavaozana hatrany, sokafy ny tsena ary mahazoa hatrany ny filan'ny mpanjifa. Amin'ny maha-olona Xinyang antsika dia tsy maintsy mahatakatra ny hevitry ny orinasa Andriamatoa Jiang isika ary manaraka ny hafainganan'ny fampandrosoana an'i Xinyang. Xinyang dia tsy manome sehatra antsika hahazoana vola fotsiny, fa mampianatra antsika ny tena dikan'ny fiainana koa. Feno fankasitrahana ny sehatra Xinyang izahay ary misaotra anao tamin'ny asa mafy nataonao.
Amin'ny 16:30, milamina sy milamina ny ekipa ao amin'ny fitambaran'ny sampana. Ny masoandro mafana amin'ny fahavaratra dia tokony hanendasa ny tany, fa ny fanahy, ny fanahy ary ny fanahin'ny olona Xinyang dia natakalo rahona manga kely hanaronana ny masoandro, ary ny tadin'ny rivotra dia manampy tsikelikely ny fisehoan'ny fitondran-tena ao amin'ny ekipa. Miaraka amin'ny rivotra milamina, androany ny fisehoantsika ara-moraly dia hita taratra ny rivo-piainan'ny orinasa Xinyang ekipa, sekoly ary miaramila. Ny ekipanay dia tokony hifantoka amin'ny fametrahana fototra mafy orina ho an'ny Xinyang efa zato taona. Manantena aho fa hitazona ny firaisankina sy ny fomba fiasa mahomby nasehontsika androany tamin'ny asantsika isan'andro. Ny hafainganam-pandeha dia maneho ny firaisan'ny fahalalana sy ny fihetsiky ny olona Xinyang. Amin'ny farany, ny valiny dia aseho ihany koa amin'ny olona rehetra amin'ny fampisehoana mahafinaritra. Izahay Xinyang Ny famokarana ny tsipika famokarana terminal, ny atrik'asa, ny atrikasa fanjaitra ary ny sampana kalitaon'ny mpanara-maso no nahazo ny telo voalohany. Ireo singa sy atrikasa miolakolaka dia nahitana vokatra tsara tamin'ny famokarana isan'andro. Ny fanaovana fanjaitra dia miasa mafy ihany koa amin'ny maha kintana vao misondrotra Mba hahatratra ny fijinjana avo roa heny ny kalitao sy ny varotra, ny Sampan-draharahan'ny kalitao dia mifehy fatratra ny kalitao mba hahazoana antoka fa mivoatra hatrany ny vokatra Xinyang. Minitra iray eny an-tsehatra sy asa folo taona. Aorian'ny asa matotra dia manao asa tsara izy ireo amin'ny fananganana ekipa, noho izany dia nahavita vokatra tsara izy ireo. Tokony hianatra amin'ny ekipa mahay isika, ary miaraka amin'izay dia hiala amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny asa isan'andro ary milalao feno ny tombotsoantsika manokana. Tanjon'ny orinasa.
Nanomboka tamin'ny barbecue velona sy feno fifaliana ny fiafaran'ny hetsika. Ny afo mirehitra arina dia toy ny fikasana tany am-boalohany hiady ho an'ny nofinay sy ny fahombiazan'ny orinasa Xinyang. Tahio Xinyang. Ny fianakavian'i Xinyang dia miray saina sy mieritreritra tsikelikely. Amin'ny asa ho avy dia tsy maintsy mampiasa ny tombotsoantsika manokana isika hiasa mafy ho an'ny nofinofin'i Xinyang efa zato taona ary hiantohana ny fahavitan'ny tanjon'ny orinasa 2019.
Fotoana fandefasana: Jul-07-2019